လက်ကား Amusement Park Walking Life Size For Sale Realistic Dinosaur Costume ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူ |Sanhe စက်ရုပ်
Amusement Park Walking Life Size Realistic Dinosaur Costume ရောင်းမည်။
ရွေးချယ်နိုင်သည်- Brushing, roll coating
Tags:inosaur Skeleton Cast၊ Hanging Dinosaur Skeletons၊ Dinosaur Skeleton၊ Dinosaur Skeleton Sculpture၊ ဒိုင်နိုဆောအရိုးစုပုံတူကို ဝယ်ပါ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Amusement Park Walking Life Size လက်တွေ့ဆန်သော ဒိုင်နိုဆော ဝတ်စုံရောင်းမည်။ အသက်အရွယ် animatronic ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံ ဤဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံကို ပြင်ပအပန်းဖြေဒိုင်နိုဆောပန်းခြံအတွက် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤဒိုင်နိုဆော၏အရှည်မှာ4မီတာဖြစ်သည်။ အရောင်နှင့် အရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဤလျှို့ဝှက်ခြေထောက်များ t-rex ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံကို အပန်းဖြေဥယျာဉ်ရှိ လူများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရန်အတွက် စိတ်ကြိုက်အရောင်နှင့် ဒိုင်နိုဆောအမျိုးအစားများကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ Animatronic ဒိုင်နိုဆော အချက်အလက်
လှုပ်ရှားမှုများ-1.ပါးစပ်အဖွင့်အပိတ် 2.ခေါင်းဘယ်ညာ 3.လည်ပင်းအပေါ်အောက် 4.အပေါ်နှင့်အောက် 5.အမြီးယိမ်း
ထည့်သွင်းမှု-AC 110/220V၊50-60HZ ပလပ်-ယူရိုပလပ်/ဗြိတိန်စံ/SAA/C-UL/ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုအပေါ် မူတည်သည်။ ထိန်းချုပ်မုဒ်-အလိုအလျောက် / အနီအောက်ရောင်ခြည် / အဝေးထိန်း / အကြွေစေ့ / ခလုတ် / အသံ / ထိ / အပူချိန် / ပစ်ခတ်မှု စသည်တို့။ ရေစိုခံအဆင့်IP66 လုပ်ငန်းအခြေအနေများနေရောင်ခြည်၊ မိုးရွာ၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ် ရွေးချယ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်:မီးခိုး/ရေ ၁၂၈ မျိုးအထိ အသံတိုးနိုင်ပါတယ်။/ သွေးထွက် / အနံ့ / အရောင်ပြောင်း / မီးများပြောင်း / LED မျက်နှာပြင်စသည်ဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (တည်နေရာခြေရာခံခြင်း) / conversine (လက်ရှိတွင်တရုတ်တစ်ခုတည်းသာ)
ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းသူများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူရေးဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။၎င်းတို့အားလုံးတွင် CE, UL, ISO9001:2008 ကဲ့သို့သော လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရှိပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများကို ရရှိထားသည်။
1. ထိန်းချုပ်ဘောက်စ်- စတုတ္ထမျိုးဆက် ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာကို အမှီအခိုကင်းစွာ တီထွင်ခဲ့သည်။ 2. စက်ဘောင်- Stainless steel နှင့် brushless motor များကို ဒိုင်နိုဆောများပြုလုပ်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ဒိုင်နိုဆောများ၏ စက်ဘောင်တစ်ခုစီကို မော်ဒယ်လုပ်ငန်းမစမီ အနည်းဆုံး 24 နာရီကြာ အဆက်မပြတ် စမ်းသပ်ပြီး လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ 3. မော်ဒယ်လ်လုပ်ခြင်း- သိပ်သည်းဆမြင့်သော ရေမြှုပ်သည် မော်ဒယ်၏ ရုပ်ပုံနှင့် ခံစားချက်ကို အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေသည်။ 4. ထွင်းထုခြင်း- ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပန်းထွင်းဆရာများသည် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသည်။၎င်းတို့သည် ဒိုင်နိုဆောအရိုးစုများနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပြီးပြည့်စုံသော ဒိုင်နိုဆော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ဖန်တီးကြသည်။Triassic၊ Jurassic နှင့် Cretaceous ကာလများ အမှန်တကယ် မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ကို သင့်ဧည့်သည်များကို ပြသပါ။ 5. ပန်းချီ- ပန်းချီဆရာသည် ဝယ်ယူသူ၏လိုအပ်ချက်အရ ဒိုင်နိုဆောများကို ပန်းချီရေးဆွဲနိုင်သည်။ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်ဒီဇိုင်းကိုမဆိုပေးပါ။ 6. နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခြင်း- ဒိုင်နိုဆောတစ်ခုစီသည် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ တစ်ရက်အလိုတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေသော စမ်းသပ်မှုကိုလည်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ 7. In Stock - ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဒိုင်နိုဆော အစုံ 30 ကျော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ 8. ထုပ်ပိုးခြင်း : ဒိုင်နိုဆောများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသော ပွက်အိတ်များ။PP ရုပ်ရှင်သည် ပူဖောင်းအိတ်များကို ပြုပြင်ပေးသည်။ဒိုင်နိုဆောတစ်ခုစီကို ဂရုတစိုက်ထုပ်ပိုးထားပြီး မျက်လုံးနှင့်ပါးစပ်ကို ကာကွယ်ရန် အာရုံစိုက်ပါမည်။ထိန်းချုပ်ရေးဘောက်စ်ကို လေကြောင်းပျံသန်းမှုတွင် ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ 9.Shipping: Chongqing, Shenzhen, Shanghai, Qingdao, Guangzhou, etc.ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်းကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဘက်စုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို လက်ခံပါသည်။ 10. ရှင်းလင်းခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် animatronic ဒိုင်နိုဆော တင်ပို့သည့် စက်ရုံဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဥရောပ၊ တောင်အာဖရိက၊ အရှေ့နှင့် တောင်အာရှ၊ သြစတြေးလျ၊ မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိက၊ စသည်ဖြင့် အတွေ့အကြုံရှိသည်။အဓိကနိုင်ငံများတွင် အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ ဘရာဇီး၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဂျပန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ရုရှား၊ ထိုင်း၊ UAE၊ ပိုလန်၊ စပိန်၊ ဂျာမနီ၊ ခရိုအေးရှား စသည်တို့ဖြစ်သည်။ 11.On-site တပ်ဆင်ခြင်း- ဒိုင်နိုဆောများကို တပ်ဆင်ရန် ဝယ်ယူသူ၏နေရာသို့ အင်ဂျင်နီယာများကို စေလွှတ်ပါမည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒိုင်နိုဆောတိုင်းအတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းကို ပြုလုပ်ပြီး ၎င်းတို့အား ကောင်းမွန်သောဘောင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးပါသည်။ယင်းက ၎င်းတို့၏ လေစီးဆင်းမှုနှင့် အခြားရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ပွတ်တိုက်မှုမရှိဘဲ လည်ပတ်နိုင်စေကာ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ကြီးမားစွာ တိုးတက်စေပါသည်။ Dino ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့် အရောင်ဒီဇိုင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်ခြင်းမစတင်မီ ဒိုင်နိုဆော ကိုယ်ဟန်အနေအထားများ၊ အသေးစိတ်အင်္ဂါရပ်များနှင့် အရောင်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါသည်။ဒါမှ သင်လိုချင်တာကို အတိအကျရရှိမှာ သေချာပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း- မင်းက ငါတို့ကို ဓာတ်ပုံနဲ့ အစီအစဥ်တွေ ပေးတယ်၊ ဒိုင်နိုဆော ပြပွဲတစ်ခုလုံးကို မင်းဆီ ပြန်ပို့ပေးတယ်။ ပြပွဲအသေးစိတ်ဒီဇိုင်း- ဖောက်သည်အား နောက်ဆုံးပြပွဲမြင်ကွင်းကို ပြသရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်း။ကျွန်ုပ်တို့သည် အစီအစဉ်ဒီဇိုင်း၊ ဒိုင်နိုအချက်အလက် ဒီဇိုင်း၊ ကြော်ငြာဒီဇိုင်းစသည်တို့ကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
dino prop အစစ်အမှန် dino lifelike dino animatro ဒိုင်နိုဆော စက်ရုပ် ဒိုင်နိုဆော စက်ရုပ် ဒိုင်နိုဆော မော်ဒယ် ရောင်းရန် စက်စက်ရုပ် ဒိုင်နိုဆော မော်ဒယ် ဒိုင်နိုဆော ပန်းခြံ အလှဆင် ကျားကန် ဒိုင်နိုဆော ကာတွန်း animatronic ဒိုင်နိုဆော အပန်းဖြေ ဥယျာဉ် ဒိုင်နိုဆော ကမ္ဘာ့ အရွယ်အစား ဒိုင်နိုဆော animatronic dinosaur for saleur lifelike တိရစ္ဆာန် ဒိုင်နိုဆော ပြင်ပ တိရစ္ဆာန် ဒိုင်နိုဆော lifesano dinosaur အပန်းဖြေပန်းခြံ ပြင်ပအပြင်အဆင်အတွက် ပြင်ပပြပွဲ ပြသရန် animatronic dino ရောင်းရန် animatronic dino မော်ဒယ် simulation dino ကြော်ငြာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံ လက်တွေ့ဆန်သော ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လမ်းလျှောက်ဝတ်စုံ
ဝှက်ထားသောခြေထောက်များ လက်တွေ့ဆန်သော ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံ Animatro...
Dorothy The Dinosaur Halloween 3D လက်တွေ့ဆန်သော Mas...
သက်ကြီးရွယ်အိုဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော သက်ရှိသတ္တဝါ...
ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံ အစစ်အမှန် ဝတ်ဆင်နိုင်သော ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံ...
zigong Sanhe စက်ရုပ်နည်းပညာ co., Ltd
အမှတ် ၁၃ Huixin လမ်း၊ Yantan မြို့၊ Yantan ခရိုင်၊ Zigong မြို့၊ Sichuan ပြည်နယ်၊